हिरोइन साम्राज्ञीको विद्रोह
नेपाली चलचित्र हिरोइन साम्राज्ञीको विद्रोह
Nepal Online Patrika: ‘खान नपाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा रोइकराइ गर्ने हिरोइन अहिले कुन फिल्मको नाम बेचेर खाइरहेकी छन् ? जुन थालमा खाने त्यही थालमा दुलो पार्ने ? सामाजिक सञ्जालमा गर्नेबराबर अभिनय फिल्ममा पनि गरे हुने नि !’
“नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सिनियर कलाकारले जे बोल्यो, त्यसलाई मान्नुपर्ने अवस्था छ । तर, पहिलोपटक नायिका साम्राज्ञीले सिनियर कलाकारले गरेको दुर्व्यहारविरुद्ध आवाज मुखरित गरेकी छन् । यो एक हिसाबले पुरुष शोषणविरुद्ध विद्रोह नै हो ।”